Oghere rọketi: gịnị bụ ha, àgwà na akụkọ ihe mere eme | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 01/12/2021 10:00 | Emelitere ka 30/11/2021 17:57 | Astron
Mmadụ na-enwebu ebumnobi nke ịmata karịa ihe dị na mbara ala anyị. Iji nwee ike inyocha ihe a niile n'onwe ya, enwere oghere rọketi. Ọ bụ ngwaọrụ na-esi n'ikuku na-aga n'ike n'ike ma bụrụkwa ngwa ọgụ. Agbanyeghị, ọ na-arụkwa ọrụ maka nyocha oghere.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara rọketi oghere na otu ha si arụ ọrụ.
1 Kedu ihe bụ rọketi oghere
2 Ụdị rọketi oghere
4 rọketị mmanụ mmiri mmiri
Kedu ihe bụ rọketi oghere
Rọketị ndị a na-enwekarị injin jet (nke a na-akpọ rocket engine) nke na-ebute ngagharị site n'ịchụpụ gas n'ọnụ ụlọ combustion. Enwere ike ịkwanye ha site na ọkụ nke ihe na-emepụta ihe na tube mmalite.
Rọket bụkwa ụdị igwe, ekele maka injin combustion n'ime. nwere ike ịmepụta ike kinetic dị mkpa iji gbasaa akụkụ nke gas na-agbapụ site na tube. Ọ bụ ya mere ha ji nwee ụgbọ mmiri. Ụgbọ mmiri ndị na-eji ụdị mkpagharị a na-akpọkarị rọketi.
Site n'enyemaka nke rọketi, a pụrụ iziga nyocha ndị na-emepụta ihe, satịlaịtị na ọbụna ndị na-enyocha mbara igwe na mbara igwe. N'echiche a, anyị enweghị ike ichefu ịdị adị nke ihe a na-akpọ roket oghere. Ọ bụ igwe eji arụ ọrụ igwe ọkụ n'ime nke na-emepụta ike kinetic maka mgbasawanye nke gas maka ịgbasa ụgbọ elu.
Ụdị rọketi oghere
Enwere ọtụtụ ụdị rọketi oghere, nke kachasị mkpa bụ:
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụ ọgụgụ nke usoro, anyị ga-achọta otu agba rọketi, nke a na-akpọkwa rọketi monolithic, na rọketi multiphase. Dị ka aha ahụ pụtara, e nwere ọtụtụ usoro na-eme n'usoro.
Ọ bụrụ na anyị na-atụle ụdị mmanụ ụgbọala, anyị ga-ahụ rọketi nke mmanụ ọkụ siri ike, Ebe a na-agwakọta oxidant na onye na-emepụta ihe na steeti siri ike na ụlọ ọkụ ọkụ, na rọketi mmanụ ọkụ. A na-eji nke ikpeazụ mara na a na-echekwa oxidant na propellant n'èzí ụlọ.
N'akụkọ ihe mere eme nile, e nweela rọketi dị mkpa n'ihi na ha zipụrụ ụmụ mmadụ n'ụzọ gara nke ọma. Anyị na-ezo aka na ndị a:
Vostok-K 8K72K, Nke a bụ rọketi mbụ mmadụ. Emepụtara ya na Russia na ọ bụ ya mere Yuri Gagarin bụ onye mbụ rutere mbara igwe.
Atlas LV-3B. Mee John Glenn rọketi America mbụ rutere n'ụwa orbit.
Saturn V, rọketi ahụ butere Neil Armstrong, Michael Collins na Buzz Aldrin na ọnwa.
A na-akpọkwa mmewere pyrotechnic nwere tube ntụ ntụ rọketi. Enwere wick na ala nke cylinder: mgbe a na-agbanye ọkụ, ọ na-ere ọkụ ma na-ebelata gas, na-eme ka rọketi na-ebili na ngwa ngwa ngwa ngwa ruo mgbe ọ gbawara n'etiti ikuku ma na-eme oké mkpọtụ.
Ọ bụ ezie na ụkpụrụ nke ịrụ ọrụ rọketi oghere dị mgbagwoju anya, ụkpụrụ Ọ bụ otu ihe ahụ nke rọketi egbe egbe mbụ anyị maara kemgbe 1232. Ọ pụtawo na ụfọdụ ndekọ nke nchekwa nke isi obodo Henan na narị afọ nke XNUMX. Ndị Arab mechara webatara rọketi na Europe na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, mana ejiri ya dị ka ngwa agha na kọntinent ahụ dum ruo mgbe ha kwụsịrị na narị afọ nke XNUMX.
Rọkịta oghere na-agbaso iwu nke atọ nke Newton, ụkpụrụ omume na mmeghachi omume. N'ụzọ bụ isi, ha na-eji engine combustion dị n'ime na-emepụta ike kinetic dị mkpa maka mgbasawanye nke gas.
Ihe ọkụ ọkụ na-akpata ọ dị ike nke ukwuu, ọ ga-ejikwa nnukwu ike kwatu ikuku, dị ka iwu nke atọ Newton siri kwuo: ike ọ bụla dabara na ike ọzọ nke nha nha n'akụkụ nke ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ikuku na-eji otu ike na-ebugharị rọketi ahụ dị ka ike ala nke gas na-eme. Mgbe a na-achụpụ gas, ike na-emepụta site na usoro a na-eme ka mmeghachi omume ahụ ọ bụghị nanị na-ebuli rọketi ahụ, kamakwa iji kwe ka ọ rute oke ọsọ ọsọ.
rọketị mmanụ mmiri mmiri
Mmepe rọketị ndị na-eku mmiri malitere n'afọ 1920. Ọ bụ Goddard rụrụ rọketi mmiri mmiri mbụ wee malite na 1926 na nso Auburn, Massachusetts. Afọ ise ka e mesịrị, a rụkwara rọketi mmiri mmiri German nke mbụ na nkeonwe. N'ọgwụgwụ 1932, ndị Soviet Union webatara ngwá agha ya na nke mbụ ya.
Akpa rọketi nwere mmanụ ọkụ buru ibu na-aga nke ọma bụ nnwale German V-2, nke e mere n'oge Agha Ụwa nke Abụọ n'okpuru nduzi nke ọkachamara rọketi Wernher von Braun. Ebu ụzọ malite V-2 site na ụlọ ọrụ nyocha nke Peenemünde dị n'àgwàetiti Usedom na October 3, 1942. N'ọgbọ mbụ nke rọketi mmiri mmiri, ọnụ bụ akụkụ nke na-ebu ụgwọ, nke nwere ike ịbụ isi agha ma ọ bụ ngwá ọrụ sayensị.
Akụkụ dị nso isi na-enwekarị ngwaọrụ nduzi, dị ka gyros ma ọ bụ gyro compasses, ihe mmetụta ọsọ ọsọ, ma ọ bụ kọmputa. N'okpuru ebe a bụ isi tankị abụọ: otu nwere mmanụ ụgbọala na nke ọzọ nwere oxidant. Ọ bụrụ na oke rọketi ahụ adịghị oke ibu, enwere ike ịduzi akụkụ abụọ ahụ na injin ahụ site na iji obere gas na-adịghị arụ ọrụ na-amanye tank mmanụ ya.
Maka nnukwu rọketi, usoro a anaghị adị irè n'ihi na tank ahụ ga-adị oke arọ. Ya mere, n'ime nnukwu rọketi mmiri ọkụ, A na-enweta nrụgide site na mgbapụta dị n'etiti tank mmanụ na moto rocket. Ebe ọ bụ na mmanụ ọkụ a ga-agbapụta dị nnọọ ukwuu (ọbụlagodi na V-2 na-ere ọkụ 127 n'arọ nke mmanụ ọkụ kwa nkeji), mgbapụta a chọrọ bụ centrifuge dị elu nke na-ebugharị gas turbine.
Ngwa nke nwere turbine na mmanụ ya, mgbapụta, moto, na akụrụngwa niile metụtara ya bụ injin nke rọketi mmanụ mmiri. Site na ọbịbịa nke ụgbọ elu ndị mmadụ, ụgwọ ọrụ agbanweela na ọtụtụ rọketi apụtala, dị ka Mercury, Gemini na Apollo. N'ikpeazụ, site na ụgbọ elu mbara igwe, rọketi mmiri mmiri na-ebu na ibu ya na-ejikọta n'ime otu nkeji.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere rọketi oghere na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » rọketi oghere